वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण तथा मधेशी दल (सम्पादकीय)
अहिले देश तालमेल र गठबन्धनको राजनीतिक चक्करमा रूम्लिएको छ । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतासम्मै गर्ने चुनावी तालमेल र सहकार्यको साइड इफेक्टले देशमा राजनीतिक धु्रवीकरणलाई शिखरमा उचाल्दै छ । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी खेमाको गठबन्धनले मधेशी दलहरूलाई यक्ष प्रश्नको घेरामा पारिदिएको छ कि अब उनीहरू कुन कित्तामा जाने ? वाम गठबन्धनमा कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ? या मधेशी दल स्वतन्त्र हैसियतमा रहने ?
किनभने मधेश मैत्री दल कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्ततः विघटन भइसकेको छ । सत्तालिप्साका कारण मात्रै माओवादी सरकारमा छ । माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठ्याक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । माओवादीले संविधान संशोधनको विपक्षी दल एमालेसँग गरेको गठबन्धनले अब मधेशी दल माओवादीसँग आश्वस्त र विश्वस्त भइरहने अवस्था छैन । उता काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मधेशी दल सामेल हुने हो भने त्यसले मात्रै मधेशी दलको माग पूरा गर्ने सम्भावना लगभग कमजोर छ ।
मधेशी दलहरू लोकतान्त्रिक वा वाम गठबन्धनको राप र चापबाट मुक्त भएर तेस्रो शक्तिका रूपमा नै बसिरहन पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित राजनीतिक राजमार्ग होइन । किनभने ठूला दलहरूको वाम तथा गैर–वाम गठबन्धन भनेको देशलाई दुइ दलीय राजमार्गमा लैजाने कसरत हो, जहाँ मधेशी तथा अन्य क्षेत्रीय दल स्वतः छायामा पर्ने निश्चित छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत मधेशी दलले देखाएका छन् । राजपा, संघीय समाजवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्व काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुँदै पनि छन् । तर यसले उनीहरूको मुख्य माग संविधान संशोधनको विषय पूरा गराउन सम्भव हुने छैन्, कारण किनभने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसंँग आवश्यक दुई तिहाई मत ल्याएर संसदमा हालीमुहाली गर्ने हैसियत बनिसकेको छैन । बरू यो सम्भावना थोरै भए पनि वाम गठबन्धनसँग छ, भलै त्यो पनि धेरै कठिन छ । स्थानीय तह चुनावको ताजा मतादेशको जगमा मधेशी दलहरूले तत्कालै पार्टी एकता गर्नु उनीहरूका हितमा छ । २ नम्वर प्रदेशको असोज २ को चुनावमा तीन मधेशी दल राजपा, संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरम मिलेको भए पहिलो दल बन्ने जनादेशले देखाएको छ । तर जनादेश अनुसार मिल्ने र ठूला दल विरूद्ध झम्टिने रहर र हैसियत तीनटै मधेशी दलले देखाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूको नेतृत्वमा नेताहरूको आपसी ‘ईगो’ले एकको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन ।
राजपाका नेता हृदेश त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेर राजपालाई दनक दिए । फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन् भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानै पर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य बाध्यता थपिदैछ । यो दल चुनाव अगावै काँग्रेस र वाम मध्येका दुबै गठबन्धनमा विभक्त भएर विलय भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
संघीय समाजवादीमा पनि दुई धार छन् । जनजाति तर्फका नेता अशोक राई वा राजेन्द्र श्रेष्ठहरू पूर्व एमाले हुन्, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पूर्व माओवादी हुन् । स्वभाव, विगतको पृष्ठभूमि र मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा संघीय फोरम वाम गठबन्धनसँग निकट छ । उसले मधेशको उदाउँदो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । तर काँग्रेस भर्सेज वाम गठबन्धनको रापमा अब संघीय समाजवादी एक्लै मधेशको बलियो शक्तिका रूपमा टिकीरहन धेरै चुनौति थपिएको छ । पछिल्लो ध्रुवीकरण मधेशी दलका लागि अनपेक्षित, अप्रत्याशित र अति वाध्यात्मक हो । अब उनीहरू पनि तीन दल भएर होइन सिंगो एक दल भएमा मात्रै राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली हुनेछन् । अन्यथा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य संकटतिर धकेलिने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल असोज २७ गते शुक्रबार ।